Inye maka Apple TV na-enweta mmelite mbụ ya | Esi m mac
Inye 4 Maka tvOS, mbipụta Apple TV nke ọkpụkpọ mgbasa ozi dị ike maka iPhone, iPod touch na iPad, emelitere mgbe ọmalitere na ọgbọ nke anọ Apple TV na mbido ọnwa a. Iji malite ngwa ọ bụ ugbu a ka okpukpu iri ngwa ngwa mgbe ị na-achọ metadata (dabere na ụdị vidiyo), nke kwesịrị belata oge nchere mgbe Inye na-enyocha ihe ntanetị a gbakwunyere.
na nyocha nke a ngwa bụ ikpọ, na anyị nwere ike ikwu banyere ụfọdụ ndị kasị mma na ya ọrụ.
Nke a bụ ihe kacha mma video player na i nwere ike ịhụ. Prodị pro a bara uru ịkwụ ụgwọ. Iji tinye nkwarụ, ọ na-esikwa ike, ha kwesịrị imeziwanye njikọta ha na Plex Media Server, na-ebu metadata nke sava a, ma na-agbazi nke anaghị ebu ndepụta vidiyo ma ọ bụrụ na ọ dị oke.
Ngwa kachasị mma iji nweta NAS ma nwee ike ịnweta metadata niile nke usoro na ihe nkiri.
1 Mmezi vidiyo
2 Mgbanwe ndị ọzọ
3 Mgbanwe na inye 4.0.1
Mgbe ịmalitere igwu vidio dị na mbụ, ngwa ahụ ugbu a ga-enye malitegharịa n'ụdị ma ọ bụ bido site na mbido.ma ọ bụ. N'oge a na-akpọghachi egwu, Siri Remote na-eme ihe ugbu a dịka o kwesiri, nke pụtara na ị nwere ike pịa aka nri ma ọ bụ aka ekpe nke mpempe aka iji wụlite ma ọ bụ azụ.
Na 'Ntọala' ị nwere ike ịhụ mbipụta Pro, dịka na mbipụta iOS nke ngwa ahụ. Ugbu a, nhazi nhazi nhazi enwetawo uzo ohuru ka ihichapu ihe ndi edere na nso nso a na ngwa oru Dolby y DTS. Enwere nkwenye zuru oke nye Dolby Digital Plus (AC3 / E-AC3), DTS, na DTS-HD ọdịyo.
Mgbanwe na inye 4.0.1
Nke a bụ ihe ọhụụ na Infuse 4.0.1 maka tvOS:
Nwere ike ịga search metadata ngwa ngwa (ugboro ise ma ọ bụ 10 ugboro ngwa ngwa dabere na ụdị vidiyo).
Ugbu a ana m ajụ gị ma ịchọrọ malitegharịa o bido site na mbido mgbe ị na-egwu vidiyo.
Gaa na ihu ma ọ bụ azụ azụ sekọnd iri site na ịpị aka nri ma ọ bụ aka ekpe nke padị emetụ.
Pịa ugboro abụọ ugboro elu nke touchpad iji laghachi ngwa ngwa n'elu echiche ahụ.
Nhọrọ site na Dolby na DTS.
Agbakwunyere nzere maka 'Infuse Pro' na 'Ntọala'.
'Folda'maka usoro telivishọn gị.
Nhọrọ iji hichapụ ndepụta ị ka lere anya.
para budata Infuse 4 pịa njikọ ndị a, nke anyị tinyere dị ka isi mmalite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple TV » Inye maka Apple TV na-enweta mmelite mbụ ya
Azutara m infuse ma enweghi m ike ijikọ na channelụ nke decoder m site na mgbaàmà dnla
Zaghachi Manuel Palma
Apple na-achọ ndị ọrụ na-enweghị ihe ọmụma banyere Final Cut Pro X